Maninona no saka saka | Noti saka
Ny antony itiavantsika saka
Fanontaniana napetraky ny olombelona ny tenany indray mandeha ... ary na dia anio aza dia mbola manontany tena ihany izy indraindray, indraindray. Rehefa dinihina tokoa, dia biby mahaleo tena sy manirery izay tsy te-hiaraka amin'ny olona. Io no nolazaina hatrizay, marina? Saingy, ireo izay nanararaotra ny ho tonga fianakavianan'ny sasany tamin'izy ireo, ary isika, Fantatsika fa tsy izany. Tsia mihitsy.
Raha mbola tsy manana sisiny kely ianao dia ho hitanao eto maninona izahay no tia saka.
1 Fa maninona no tena tianay izy ireo?
1.1 Manana toetra mitovy amin'ny antsika izy ireo
1.2 Izy ireo no sakaizantsika volom-borona tsara indrindra
2 Inona no lazain'ny siansa?
2.1 Ireo tia saka dia mazàna mampiditra olona tsy fantatra
2.2 Ny catlovers dia mety maniry bebe kokoa ny kolontsaina
3 Tsy tiako ny saka, fa maninona?
Fa maninona no tena tianay izy ireo?
Ny saka sy ny olona dia tsy mety ho hafa noho izany: ny sasany, matetika saro-pantarina, manirery, izay te-tsy ho voamariky ary mandany tapany tsara amin'ny fiainany matory; ny hafa kosa etsy andaniny, ara-tsosialy isika, tianay ny mitokantokana fa amin'ny fatra kely (amin'ny ankapobeny), ary matetika izahay dia mankafy ny any ivelany.
Na izany aza, maro amintsika no raiki-pitia amin'ny fijeriny mahafinaritra, ny fihetsiketsehana mailaka, izay tsy mahomby, na dia toa hafa aza, mizara ny ankamaroan'ny fototarazo misy azy amin'ny biby toy ny tigra, liona na cougars.
Izany indrindra ve, amin'ny farany, inona no mahavariana antsika amin'ny saka? Eny, tsy ampiantranoina, na tsia mihitsy. Tsy toy ny alika, volom-borona izay mahatalanjona ihany izy ireo fa tsy toy ny saka, dia vonona foana ny hampifaly ny olombelona. Mandeha amin'ny làlany avy ny saka.
Azonao ampianarina fikafika izy ireo, fa raha te hanao izany izy ireo dia tsy hahalala izany; raha mahazo tambiny izy ireo (tsaboina, fivoriana manala baraka ary / na fotoam-pilalaovana).
Raha ny fahitako azy dia tianay ny biby volom-biby satria…:
Manana toetra mitovy amin'ny antsika izy ireo
Marina izany. Fantatra fa ny biby, olona koa, mifanerasera tsara kokoa amin'ny zavamananaina hafa manana toetra mitovy amintsika isika. Na dia biby mpiremby aza ny saka, izay hatrany am-bohoka ka hatramin'ny fiafaran'ny androny dia tonga lafatra ny teknika fihazany amin'ny alàlan'ny filalaovana, dia mitovy amintsika amin'ny zavatra sasany. Angamba, ny zava-dehibe indrindra hananana fiaraha-miaina tsara. Ohatra:
Raha manome fitiavana azy ireo ianao dia homeny anao. Ary raha tsy miraharaha azy ianao, hanao izay rehetra azo atao amin'ny fisintomana ny sainao.
Miarahaba anao rehefa hitany fa tonga ianao, ary indraindray aza miteny hoe "veloma" - meow - rehefa miala ianao.
Tena faly izy rehefa omenao fitsaboana - ho an'ny saka-, ary more rehefa omenao sombin-tsigara misy setroka na ham.
Rehefa tsaboinao tsara izy indray mandeha, dia mihamalemy ny fifandraisana, ary very ny fahatokisana. Avy any, mety maharitra amam-bolana vao hahatsapa ho tsara aminao indray ilay saka.
Fantatrao ve ny sasany amin'ireo fihetsika ireo amin'ny olombelona?
Izy ireo no sakaizantsika volom-borona tsara indrindra
Mahafinaritra, tia fiaraha-monina, be fitiavana izy ireo, mampihomehy anay ... Ary ny rehetra, mba hanana tafo fotsiny hiarovana azy ireo amin'ny toetr'andro ratsy, sy ny mpamahana sakafo feno. Eny, sy kilalao, scratchers, fako fako ... Saingy izahay no mitady ny tsara indrindra ho azy ireo, ka ny fandaniana ara-bola tafiditra ... dia tsy mampatahotra fotsiny.
satria anisan'ny fianakavianay izy ireo.
Inona no lazain'ny siansa?
Ity lahatsoratra ity dia tsy ho feno raha tsy fantatra izay hitan'ny siansa. Marina fa rehefa mandalina ny fitondran-saka sy / na ny olona tia azy ireo izy ireo dia miafara amin'ny fanontaniantsika zavatra toy izao: »ary tsapan'izy ireo ve izao?». Marina izany.
Saingy tsy tokony hohadinointsika fa, ho an'ny fahita ara-tsaina madio, ho an'ny olona maro dia zava-baovao izany. Ary mbola maro ny manontany tena raha manana fihetseham-po ny saka na tsia.
Raha raisina izany rehetra izany dia andao hojerentsika izao izay lazain'ny siansa.
Ireo tia saka dia mazàna mampiditra olona tsy fantatra
Tamin'ny 2010, olona 4500 no nameno endrika iray izay novolavolain'ny University of Texas. ATSINANANA fianarana Notarihin'i psikology Sam Gosling, ary nozarainy ho mpitia alika, mpitia saka, samy biby na izy roa.
Ny fanontaniana dia namboarina mba hahalalany hoe inona no fironana ho tia fiarahamonina, raha malala-tsaina izy ireo, raha sariaka izy ireo, ary / na raha manahy izy ireo, ankoatry ny hafa. A) Eny, Ny fitsapana Golding dia namaritra ireo tia saka ho olona misaintsaina kokoa sy tsy misy olona, ​​tsy dia miorina amin'ny fihetseham-po, fa manana eritreritra bebe kokoa sy manana fironana ambony hanana traikefa vaovao.
Ho an'ny 'catlovers'mety ho tian'izy ireo kokoa ny kolontsaina
Efatra taona taorian'ny nanaovan'i Gosling ny fianarany, profesora psikolojia ao amin'ny University Carroll any Wisconsin antsoina hoe Denise Guastello no nitazona ny azy manokana, tsy ny toetran'ny olona tia biby ihany, fa ny tontolo iainan'izy ireo koa.
Ohatra, ny olona iray izay tsy mila mandeha amin'ny alika, dia afaka mandany io fotoana malalaka io amin'ny famakiana boky, na amin'ny fitsidihana ny tranombakoka ohatra. Na dia mazava ho azy aza, tsy midika akory izany fa ny tia saka dia manan-tsaina kokoa noho ny tia alika, tsy izany velively; fa eny izany mpankafy saka dia mirona ao an-trano sy tsy mampiditra olona.
Angamba, ary angamba angamba, izay no antony mahatonga ireo mpanakanto sy mpanoratra maro be, maty na tsia, izay niaina na niara-nipetraka tamin'ny saka, toa an'i Jorge Luis Borges na Ray Bradbury, ankoatry ny hafa.
Raha tianao dia azonao atao ny mamaky ilay fianarana eto (Amin'ny teny anglisy).
Tsy tiako ny saka, fa maninona?
Misy olona tsy tia saka koa satria namorona karazana phobia ho azy ireo izy ireo, na noho izy ireo sendra lozam-pifamoivoizana, na satria tsy tian'izy ireo tsotra izao satria tsy mety tia hamsters ohatra isika rehetra.
Raha ho an'ity farany ity dia tsy misy azo atao. Fa raha noho ny phobia na toe-javatra mampihetsi-po niainana taloha, dia tsara kokoa ny manatona mpitsabo aretin-tsaina, indrindra fa raha hiara-hiaina amin'ny olona tia saka ianao. Izany dia hahatonga ny fiaraha-miaina tsy misy fisalasalana ho tsara kokoa.
Na izany aza, aza terena. Izany hoe Phobias dia tsy manasitrana isan'andro na amin'ny manaraka, na amin'ny fikapohana saka izay manatona anao. Tsy maintsy mandeha tsikelikely ianao, amin'ny hafainganam-pandehanao. Mifalia mahatakatra azy ireo, izany dia mety hampilamina anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » curiosities » Ny antony itiavantsika saka
Yajaira Lopez dia hoy izy:
Tiako. Olona velona mahafinaritra izy ireo. Ny zavaboarin'Andriamanitra dia toy ny zava-manan'aina rehetra monina eo amin'izao rehetra izao
Valiny tamin'i Yajaira Lopez
Voalaza fa Andriamanitra no namorona ny saka, raha te hikorisa azy sy handray izany eny an-tsandrintsika, tsy azontsika atao amin'ny alika toy ny, Tiger, Lion, Panther, leoparda, cheetah, sns, sns heveriko fa hevitra marina izany 😊